कुनै एक आधुनिक लोकतान्त्रिक समाजमा बच्चाहरु र किशोरों सहित अधिकार बिना बाँच्न सक्छ। दुर्भाग्यवश, हाम्रो देशमा नागरिक कानुनी शिक्षा एक कम स्तरमा छ। यो समाधान गर्न, तपाईं ज्ञान को यो क्षेत्र धेरै व्यापक छ, किनभने आफ्नो अधिकार र पहिले नै विद्यालयमा दायित्व बच्चाहरु familiarize गर्नुपर्छ।
किशोर आफ्नो अधिकार आनन्द उठाउन सक्छौं? लेखन अब छोराछोरीलाई सही रूपमा यस्तो कुरा सिक्न किनभने यो विषय मा, स्कूल शैक्षिक संस्थाहरू मा सान्दर्भिक हुन सक्छ। गरेको मा निबन्धहरू, निबन्धहरू र रिपोर्ट लेखन मा गर्न मद्दत गर्नेछ मुख्य बुँदाहरू हेरौं।
10 वर्ष बच्चाहरु
हामी विचार जो अधिकार को पहिलो श्रेणी, 10 वर्ष केटाकेटीलाई लागू हुन्छ। सम्पत्ति र व्यक्तिगत: यी अधिकार दुई समूह विभाजित छन्। बच्चा गर्ने अधिकार छ:
आमाबाबुले को मर्मतका लागि।
राज्य द्वारा प्रदान लाभ को लागि।
आफ्नो अनुमति आमाबाबुको सम्पत्ति को प्रयोगमा।
एक मध्यम आकारको व्यावसायिक कारोबार प्रतिबद्ध गर्न।
व्यक्तिगत लागि समावेश:
चासो को सुरक्षा गर्ने अधिकार।
शिक्षा अधिकार (पूर्वप्राथमिक र विद्यालय)।
छोराछोरीको संगठन सामेल गर्ने अधिकार।
10 14 वर्ष देखि बच्चाहरु
श्रेणी अर्को - बच्चाहरु माथि 14 वर्ष। किशोर 10 वर्ष को उमेर मा आफ्नो अधिकार अभ्यास हुन सक्छ?
एक किशोरी को इच्छा यसलाई सम्बन्धित कुनै पनि विषयमा खातामा लिनुपर्छ। बच्चा सहित तिनलाई व्यक्तिगत सम्बन्धी कुनै पनि न्यायिक कार्यवाही मा सुने गर्न सही छ। राय सधैं (विद्यार्थीलाई इच्छा आफ्नो चासो संग एकै समयमा पर्नु जब गर्दैन, वा उहाँको एउटा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ अवस्थामा बाहेक) लग्नु गर्नुपर्छ खातामा।
बच्चा को छ मतदान गर्न दायाँ कोसँग उहाँले छोडपत्र, को spouses को मामला मा स्थायी निवास आधार रहने इच्छा अभिभावक को चयन मा।
नाम परिवर्तनको लागि सहमत हुन सक्छ।
14 16 देखि श्रेणी
यो उमेर - सबैभन्दा कठिन छैन मात्र बच्चाको मनोवैज्ञानिक, तर पनि कानुनी मामलामा, यो उमेर किशोरी एक पासपोर्ट प्राप्त, र यसैले आफ्नो अधिकार विस्तार गर्दै छन् (र जिम्मेवारी) छ। उहाँले पहिले नै 14 वर्ष पुरानो छ भने एक किशोरी आफ्नो अधिकार आनन्द सक्छ रूपमा?
बैंक मा जम्मा छ, र तिनीहरूलाई को निपटान गर्न।
विभिन्न संगठनहरूको रोजगार अनुबंध (लिखित अभिभावकको सहमति संग) संग सम्झौताहरू प्रवेश।
बच्चा बौद्धिक क्षेत्र मा ग्रन्थकारिता संरक्षण गर्ने अधिकार छ।
को किशोरी आफ्नो आय, आय को निपटान गर्ने अधिकार छ।
एक मोटरसाइकल चलाउनु जान्नुहोस्।
र अन्तिम उमेर कोटी - 16 18 वर्ष देखि।
एक किशोरी पूर्णतया परिचालन घोषणा गर्न सकिन्छ।
यो आमाबाबुको सहमति बिना रोजगारीको अनुबंध प्रवेश गर्ने अधिकार छ।
राम्रो कारण संग विवाह प्रवेश गर्न सक्छ।
यसरी यो बच्चा र किशोर को अधिकार वर्गीकरण गर्न सम्भव छ। निस्सन्देह, एक किशोरी आफ्नो अधिकार आनन्द सक्छ कसरी प्रश्न, यो कठिन पूर्ण जवाफ दिन छ, किनभने आजकल अधिकार र हरेक मानव धेरै को जिम्मेवारी। तर हरेक किशोरी बाध्य आधारभूत थाहा।
प्रकृति, समाज, प्रविधि जानकारी
"बाँदर काम": मूल, अर्थ र पर्याय
पाठ को संरचना: कसरी सिर्जना गर्न र पाठ पढ्न सजिलो बनाउन। पाठ को तार्किक र अर्थ संरचना
ग्रीस, समुद्र, द्वीप, प्रकृति, जलवायु को भौगोलिक स्थिति
Ugra - कालुगा क्षेत्र मा एक नदी
कसरी स्मोकहाउस बनाउन
पूर्वनिर्धारित न्याय अदालत को रद्द लागि नमूना आवेदन। पूर्वनिर्धारित न्यायको अपील
बिरालो मा Ringworm। घर उपचार सम्भव?